वायु प्रदूषणलाई कत्तिको रोक्छ सर्जिकल मास्कले?
आयोमेल संवाददाता बुधबार, चैत २५, २०७७
देशभरको आकाश धुम्म छ। चैत लागेदेखि नै धुम्मिएको प्रदुषण झन् बाक्लिन थालेको छ।
गत बुधबारको हल्का वर्षाले वातावरण सुधारको आश गरिए पनि आइतबारदेखि पुनः प्रदूषण बढेको छ।
काठमाडौं उपत्यका सोमबार र मंगलबार वायु प्रदुषण भएको सहरको सूचीमा एक नम्बरमा पर्‍यो।
प्रदुषणको असरले पछिल्ला दिनमा अस्पताल भर्ना हुने बिरामी संख्या बढे्काे छ।
प्रदुषणका कारण आँखा पोल्ने, घाँटी खसखस हुने, टाउको दुख्ने, रूघाखोकी तथा ज्वरो आउनेजस्ता समस्या बढेको विज्ञले बताउँदै आएका छन्।
सरकारले वायु प्रदुषणबाट बँच्न अत्यावश्यक नपरि घरबाहिर ननिस्कन बारम्बार अपिल गरेको छ। निस्कनै परे मास्क प्रयोग अनिवार्य प्रयोग गर्न सरकारको सुझाव छ।
यस्तोमा हामीले लगाउने सर्जिकल मास्कले वायु प्रदुषणबाट जोगाउँछ त?
यो प्रश्न हामीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दासलाई गरेका छौं।
डा. दासका अनुसार उपत्यकामा फैलिएको वायु प्रदुषणको मात्रालाई सर्जिकल मास्कले छेक्दैन।
‘सर्जिकल मास्कले ठूलो धुलोका कण रोक्ने भए पनि मिहिन कणलाई छेक्दैन,’ डा. दास भन्छन्, ‘अहिलेको समयमा एन ९५ मास्कको प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ।’
५ माइक्रोनभन्दा साना कणलाई सर्जिकल मास्कले छेक्दैन। स–साना कण शरीरभित्र सजिलै प्रवेश गर्न सक्छन्।
आजभोलि हावा चलेको छैन। घाम पनि लागेको छैन। त्यसकारण साना मिहिन खालका कणहरू वातावरणमा धेरै छन्। ती कण सिधैं फोक्सोसम्म पुग्ने र त्यसले धेरै असर गर्ने डा. दास बताउँछन्।
वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च रहेका बेला मिहिन धुलोका कण पृथ्वीको सतहमै रहेका हुन्छन। त्यसैले, सुरक्षित मास्कको प्रयोग गनुपर्ने छाती रोग विशेषज्ञ डा. राजु पंगेनी बताउँछन्।
वायु प्रदुषणमा धेरै खालका रसायन हुन्छन।
हाम्रो नाँगो आँखाले देख्ने धुलोका कणहरू ठूला आकारका हुन्छन्।
‘वायु प्रदुषणमा १० माइक्रोनभन्दा पनि साना कण हुन्छन्। ती फोक्सोकोे भित्री तहसम्म पुग्छन्,’ डा. पंगेनी भन्छन्, ‘जसले दम, श्वासप्रश्वासमा समस्या, छातीमा संक्रमण हुन्छन्।’
उनका अनुसार साता कण स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकार हुन्छन्। जसले अचानक दम हुने, श्वासप्रश्वासमा समस्या, अक्सिजनको मात्रा कम हुने र बेहोस नै हुने अवस्थासमेत आउँछ।
२।५ माइक्रोगामभन्दा साना कण फोक्सोबाट रक्तसञ्चार प्रणालीमा पनि सजिलैसँग छिर्ने डा. पंगेनी बताउँछन्।
‘रक्तसञ्चार प्रणालीमा गएको खण्डमा शरीरका सम्पूर्ण अगंलाई असर गर्ने सम्भावना बलियो हुन्छ । जसले गर्दा मुटु, मिर्गौला टाउकोसम्मै पुगेर पक्षघात, क्यान्सरसमेत हुने समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ डा. पंगेनी भन्छन्।
कोरोना भाइरस पनि प्रवेश गर्न सक्छन्
वायु प्रदुषणका कणले कोरोना भाइरस शरीरमा सजिलैसँग छिर्न मद्दत मिल्ने डा. दास बताउँछन्।
‘भाइरस आफै शरीरभित्र जाँदैन। भित्र जान माध्यम चाहिन्छ। खोक्दा, हाँछ्यु गर्दा त्यसका छिटाबाट सरेर जाने हो। तर, प्रदुषणमा हुँदा छिटा आवश्यक हुँदैन। प्रदुषणको कणमा बसेर शरीरभित्र प्रवेश गर्छ,’ दासले भने।
उनका अनुसार प्रदुषण बढेसगैँ कोरोना सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
यस्तै, प्रदुषणको मात्रा र कोरोना संक्रमितको मृत्युदर बढ्दै जानु एकआपसमा सम्बन्धित रहेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ।
वातावरण प्रदुषण क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनले कोरोनाको मृत्युदर बढेको देखिएको छ।
‘अन्य क्षेत्रको तुलनामा प्रदुषित क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको मृत्युदर २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अध्ययनले देखिएको छ,’ डा. दासले भने, ‘दुवैले असर गर्ने फोक्सोलाई नै हो।’